skpari: मनको पिडा म बिर्सौ कसरी...
मनको पिडा म बिर्सौ कसरी...
बिश्वास नै मरिसकेछ
आँखाबाट आँसु झरी सकेछ
स्थिर थियो यो मन
अन्तै कतै आज सरेछ
मुटु बिनाको शरिर भैसकेछ
मायालाऊने समय अब गईसकेछ
पुर्णिमाको रात जस्तै उज्यालो
सम्झेको थिए जिवन
अब औशिको रात सरि अंन्ध्यारो
भै सकेको छ
आँसु पुछेर हाँस्न खोजेका धेरै भयो
खै, आँखामा आँसु कहिले रिटिएन छ
मनको पिडा भुलेर बाँच्न चाहेको धेरै भयो
खै, मनको पिडा कहिल्ये सिध्दिएन छ
म बिर्सु कसरी
शिसा सरि फुट्यो चाहानाहरु सबै
बिटेका यादहरु बिर्सुं कसरी
टुक्रिएको मुटु जोडि हाँस्न खोज्छु
तर पिडा लुकाई हाँसुं कसरी
तिम्रै सपना देख्छु यहाँ हरेक रात
तै पनि यो मनलाई सम्झाऊँ कसरी
कहिले हामी मन्दिर त कहिले
गुम्बा पनि हामी धाएकै थियौं
मन्दिर गुम्बा साक्षी राखि
लाएको माया म बिर्सु कसरी
at Friday, September 11, 2009 Labels: कबिता-गजल
कृपया केहि सुझाव या प्रतिक्रया भए अबश्य लेख्नु होला, धन्यबाद...!!!
विश्वकप जितेपछि फ्रान्स र क्रोएसियाको पत्रिकामा यस्तो छापियो - पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेको क्रोएसियालाई ४-२ ले पराजित गर्दै फ्रान्स दोस्रो पटक विश्वकप विजेता बन्यो। विश्वविजेता बन्दा फ्रान्सका प्रमुख पत्रिकाहर...
Walking to school हेरेपछि -
मेराे बुबा पंचबहादुर दुवालकाे भिमरथाराेहन -
गजल - जब देखि जुध्यो नज़र म बिरामी छु । रमाइलो भो हर प्रहर म बिरामी छु । तिम्रै लागि कुना कुना सजाएर राखें । तिमी अब सम्हाल यो घर म बिरामी छु । फूल जस्तै आ...